संबाद हासो ठट्टामा राखिएको रहेछ। तर सारै सान्दर्भिक र पिडादायिक कुरो छ। संबादमा भनिए जस्तै मात्र भए त हुन्थ्यो तर मलाइ लाग्छ त्यो भन्दा १० गुना हुने वाला छ नेपालमा।
सर्ब प्रथम त तिखो प्रहारको लागी Prajwol जी लाई धन्यवाद्।
जनताको संघर्ष, बलिदान र आन्दोलनको फल फेरी एक चोटी यिनै "ब्रम्हलुट" का अभ्यस्त खेलाडिको पोल्टमा परेको छ र उनिहरु तपाईले भने जस्तै २० बर्ष देखीको आफ्नो 'जित' र 'हैकम' प्रति ढुक्क छन् । तर २४० बर्षको राजतन्त्रले समेत बिदा माग्ने दिन आयो भने यि २०-३० बर्षे चकारहरुको कहिले सम्म यसरि 'व्याज' र पेन्सन खाने हुन ! भविश्यले पक्कै देखाउने छ ।
नेपालीय जी !
दौतरिका सबै पोष्टलाई लेबलमा बर्गिकरण गर्ने क्रममा यो पोष्लाई मैले "हासो ठट्टा" मा हालेको थिएं। अहिले त्यसलाई परवर्तन गरेर "हासो ठट्टा/ व्यङ्य" बनाएको छु ।